Milamina ve ny fizahan-tany ara-pahasalamana? | Vaovao momba ny fahasalamana
Vaovao momba ny dia an-kolontsaina • Editorial • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Other • fanarenana ny dia • Safety • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao mivalona • News News
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fahasalamana » Milamina ve ny fizahan-tany ara-pahasalamana?
Tamin'ny voalohany mena, toa tsara ny fizahantany fizahantany. Mitsangatsangana any Thailand, UAE, na Allemà - ary rehefa mijery ny kolontsaina, sakafo, divay ary fivarotana ianao, mijanona amin'ny hopitaly eo an-toerana mba hikarakarana ny vavony, ny famindrana voa na fanoloana ny valahana.
Matetika ny mpizahatany mpitsabo dia miampita sisintany iraisampirenena ho an'ny fahasalamana.
Ny fitsaboana dia mety ahitana (fa tsy ferana amin'ny) mpanampy ara-pitsaboana nify, neurolojika ary aretim-po.
Vonona ny hivezivezy ara-pahasalamana, fanatsarana, na famerenana amin'ny laoniny ny olona hiala ny fireneny mba hahitana asa amin'ny alàlan'ny tobim-pahasalamana mora vidy kokoa any an-kafa.
Inona fizahantany ara-pahasalamana ve?
Ny fizahan-tany ara-pitsaboana (fantatra koa amin'ny hoe fizahan-tany ara-pahasalamana, outsourcing ara-pahasalamana na fitsangatsanganana ara-pahasalamana) dia faritana ho toy ny fitsangatsanganana miampita sisintany iraisampirenena mba hidirana amin'ny fitsaboana izay mety tsy misy any amin'ny tanindrazan'ny mpandeha. Ireo mpizahatany mpitsabo matetika dia miampita sisintany iraisampirenena amin'ny fikojakojana, fanatsarana na famerenana amin'ny laoniny ny fahasalamany amin'ny alàlan'ny tobim-pahasalamana sy fitsaboana mora vidy ary afaka ampidirina (fa tsy ferana amin'ny) fitsaboana nify, neurolojika ary aretim-po.
Ao amin'ny 2019 ny tsena fizahan-tany ara-pitsaboana manerantany wizay mitentina eo anelanelan'ny $ 44.8 miliara sy $ 104.68 miliara US ary antenaina hahatratra $ 273.72 miliara amin'ny 2027